अटोसेक्सुअल युवतीको अटोरोमान्टिक कहानी
शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ सारङ्गी न्युज
अन्य टिनएजर्सझैं मलाई पनि आफ्नो व्यक्तित्व र लुकको चिन्ता हुन्छ । जब म नुहाएर आउँछु, कपडा लगाउँछु वा सेक्सुअल अट्र्याक्सनको खोजीमा हुन्छु तब म आफूलाई ऐनामा हेर्छु ।
मेरो शरीर आकर्षक नहुन सक्छ । म पातली छु । मेरो चिउँडो निकै लामो छ । मेरो कपाल कर्ली छ तर कपडा बिना मेरो शरीर मलाई निकै आकर्षित लाग्छ ।
मलाई आफ्नो सेक्सुआलिटी बारे सोचेर कहिले पनि अचम्म लाग्दैन थियो तर १७ वर्षको उमेरमा जब मैले आफ्ना साथीलाई यसबारे बताएँ तब यसबारे मेरो सोच बदलियो ।
ती साथी र म सँगै हुर्किएका हौं र अहिले पनि एक–अर्काको निकै नजिक छौं । हामी धेरैजसो आफ्नो लैङ्गिकताको अनुभव बाँड्छौं ।
तर जब मैले मेरो साथीहरुलाई आफ्नो यौनिकताको अनुभवबारे बताएँ तब कसैले पनि मेरो कुरा बुझेनन् । उनीहरुलाई मेरो कुरा निकै हास्यास्पद लाग्यो । मेरो कुरालाई मजाक बनाए ।
म पनि उनीहरुको चुट्किलामा हाँस्थे तर भित्र भित्रै आफूमा के गल्ती छ भनेर सोच्थेँ । त्यतिबेला मलाई थाहा भयो कि म आफैंप्रति यति आकर्षित थिएँ कि जुन सामान्य होइन । तर अब मलाई यस्तो महसुस गर्ने बानी नै भइसकेको छ ।
हालै मलाई थाहा भएको छ कि म आफ्नो बारे जस्तो महसुस गर्छु त्यसका लागि शब्द पनि छ जुन विज्ञानमा प्रयोग गरिन्छ – अटोसेक्सुअल ।
के हो अटोसेक्सुआलिटी ?
जो व्यक्ति आफ्नो शरीर हेरेरै आफूलाई यौन सुख प्रदान गर्न सक्छन् र आफ्नो शरीर देखेर आकर्षित हुन्छन् उनीहरुलाई विज्ञानले ‘अटोसेक्सुअल’ भन्छ ।
उनीहरु न त ‘गे’ हुन् न ‘लेस्बियन’ नै । उनीहरुलाई न महिला, न पुरुषप्रति यौन आकर्षण हुन्छ ।
अटोसेक्सुअल एउटा यस्तो शब्द हो जसलाई परिभाषित गर्नका लागि वैज्ञानिकले निकै मेहनत गर्नुपर्यो । यो शब्दलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नका लागि न त धेरै डाटा छ न नै अनुसन्धान ।
सन् १९८९ मा यो शब्दको प्रयोग पहिलो पटक सेक्स चिकित्सक बर्नाड एपेलबाउमले एक पेपरमा गरेका थिए । उनले यो शब्दको प्रयोग ती व्यक्तिका लागि गरेका थिए जो अन्य व्यक्तिको यौनिकतामाथि आकर्षित हुन सक्दैनन् ।
तर आज यो शब्दको प्रयोग ती व्यक्तिका लागि गरिन्छ जो विशेष रुपमा आफ्नै शरीरसँग आकर्षित हुन्छन् ।
माइकल आरोन मोडर्न सेक्सुअलिटीः द ट्रुथ अबाउट सेक्स एन्ड रिलेशनशिपका लेखक हुन् । उनका अनुसार आफैंप्रति आकर्षित हुनु निकै साधारण हो तर केही व्यक्ति अन्य व्यक्तिभन्दा आफूलाई हेरेर र छोएर अत्यधिक उत्तेजित महसुस गर्छन् । यस्तै व्यक्तिलाई ‘अटोसेक्सुअल’ भनिन्छ ।
धेरैजसोले मलाई नार्सिस्ट भने । अर्थात्, ती व्यक्ति जो आफूलाई प्रेम गर्छन् र आफैंमा मुग्ध हुन्छन् । तर लण्डन युनिभर्सिटीमा पढाउने डा. जेनिफर मेकगोवन भन्छन्, ‘नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डरका बिरामीमा सहानुभूतिको कमी, अन्य व्यक्तिबाट प्रशंसाको भोकोलगायतका लक्षण हुन्छन् । अटोसेक्सुअलिटी एउटा भिन्न चिज हो ।’
डाक्टर जेनिफर भन्छन्, ‘अटोसेक्सुअल्स आफैंलाई हेरेर यौन सुख प्राप्त गर्छन् भने नार्सिस्टलाई अरुको अटेन्सन चाहिन्छ । यसबाहेक अटोसेक्सुअलिटीलाई सहानुभूति वा प्रशंसाको कमीसँग कुनै लेनदेन छैन ।’
केही विशेषज्ञका अनुसार अन्य व्यक्तिमा झैं अटोसेक्सुअलमा पनि यौनिकताका विभिन्न स्तर देख्न पाइन्छ । कोही अटोसेक्सुअलका ुसाथै अटोरोमान्टिक पनि हुन्छन् जो आफैंसँग डेटमा वा राम्रो मौसममा वाकका लागि जान्छन् ।
अटोसेक्सुअलका साथै मलाई कहिलेकाँही साधारण व्यक्तिजस्तै राम्रो हुने इच्छा हुन्छ । जब साथीहरुले मेरो अवस्था बुझ्दैनन् तब निकै रिस उठ्छ ।
जब म आफ्ना प्रेमीसँग हुन्छु तब म भिन्न महसुस गरिरहेको हुन्छु । जब हामी नजिकिन्छौं तब म प्रेमीले झैं महसुस गर्न सक्दिनँ ।
त्यतिबेला चाहिँ मलाई म पनि साधारण व्यक्तिले झैं महसुस गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर यो पनि सोच्छु कि यौनिकतामा केही पनि साधारण हुँदैन । हामी सबै अलग छौं ।
शुक्रबार, जेठ २४, २०७६, ११:०६:००